Onye na-enye nri Straightener China Manufacturer
Nkọwa:Mkpịsị aka mkpuchi maka ndị na-ebi akwụkwọ Pressvo,Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ 3 n'ime 1,Onye na-enye nri ya na Unlọ ya
Home > Ngwaahịa > Decoiler Straightener Feeder > Inye Nri na Ngwunye Aka > Onye na-enye nri Straightener
Onye na-enye nri Straightener
Ihe Nlereanya.: MFL2
STRAIGHT ENER SER VO FEEDER
Straightener Servo Feeder dị mkpụmkpụ ohere a haziri emebe iji gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ akụkụ yana maka nhazi nke ihe ndị nwere ike dị elu - ọbụlagodi ogo dị larịị dị warara.
Site na njikọta nke eriri ụzọ na mpịakọta gaa n'otu igwe, nke a na-akpọ feeder-straightener, nke edobere ozugbo na pịa, enwere ike ịchekwa oghere nke ihe eji agbatị agbatị.
A na-enye onye na-ebu nri ihe nwere ihe dị n'ime (ma e jiri ya tụnyere) obere akaghịghị agbatị nke dị n'okpuru ndozi.
Ihe ndozi ahu emere ya nke oma na akwara oso nke oma na kwa nke nwere loop nke oma. Site na otu a enwere obi ike na a ga-enwe ọtụtụ ihe zuru oke maka inye ndị na-eri nri nri.
Ọ bụrụ na ogologo nri na ọnụego iku ume chọrọ ihe akụrụngwa buru ibu karịa akụrụngwa, a ga - eji olulu erimeri kpochaa eriri nri.
Meeflay All-in-one coil feed line bụ adabara ụdị nile nke ụgbọ ala stamping, akụrụngwa akụrụngwa, kọmputa na kọmputa componets, ngwaike na metal akụkụ wdg ụlọ ọrụ.
Ọdịnihu nke Straightener Servo Feeder
1. Nzizi di elu: +/- 0.1mm.
2. Chekwaa mpaghara akuku.
3. Japan servo moto, PLC na akụkụ eletriki ndị ọzọ, ogologo oge.
4. Ọrụ dị mfe, nchekwa na nkwụsi ike dị elu.
Straightener Servo Feeder
1) Ihe ogugu di n’elu bu ihe ndi nwere ume kariri = 245N / mm², Max. tensile ike σb = 392 N / mm²)
2) Nkọwapụta dị iche iche ga-agbanwe maka ndozi na-enweghị ọkwa.
Onye na- ahụ maka ọkụ Stightener Servo dị mma maka ịnya ụgbọ ala, imepụta ngwa ọrụ, kọmpụta na ngwa elektrọniks, ngwaike na akụkụ igwe wdg.
Akụkụ ụgbọala: Braket, Damper, Barke Pad, Tie Bar, ngwa eletriki, shell akụkụ nke ndị na-ebi akwụkwọ, kọmpụta kọmpụta, ụgbọ ala slide nke oche ụgbọ ala, Splash Shield nke ahụ ụgbọ ala wdg.
Stightener Servo Feeder i n Short Space Design na -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị.
Onye na-enye nri Straightener maka imeghe eriri igwe na-emepụta ihe nchara.
Nke a bụ otu n'ime ndị ahịa anyị na Slovenia, ha na-arụpụta akụkụ mmechi akụkụ ya na Straightener Servo Feeder.
Site na njikwa Yaskawa Servo na Mitsubishi PLC, akara nri nwere ike iru ± 0.15mm nri n'ụzọ ziri ezi.
Ngwaahịa : Decoiler Straightener Feeder > Inye Nri na Ngwunye Aka
Space Master Compact Coil Line Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler Straightener Servo Feeder Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye eriri igwe na-aga-abuo Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enye nri Straightener Kpọtụrụ ugbu a
Decoilers Straighteners Servo Roll Feeders Kpọtụrụ ugbu a
Inye nri na 3 n'ime 1 Kpọtụrụ ugbu a
Automation Press Servo Feeder Kpọtụrụ ugbu a
Nhazi 3 Na 1 Onye Nri Kpọtụrụ ugbu a
Mkpịsị aka mkpuchi maka ndị na-ebi akwụkwọ Pressvo Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ 3 n'ime 1 Onye na-enye nri ya na Unlọ ya Mkpịsị aka mkpuchi maka Servo Press Mkpịsị aka mkpuchi & Lije Pressfeed Mkpịsị aka nri na - akwụ ụgwọ maka mkpịsị akwụkwọ mkpị Ndị na-enye nri na ndị na-akwụ ọtọ Ngwaọrụ na-ahụ maka mpempe akwụkwọ